ပါဝါ viz အင်ဂျင်5မှ Vizrt selection Matrox X.mio25 Q4 ကဒ်များ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Vizrt selection Matrox X.mio5 Q25 ကဒ်များကို Power viz အင်ဂျင်4မှ
Montreal မှာ Quebec - စက်တင်ဘာလ 13, 2019 - Matrox®ဗီဒီယိုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည် Vizrtဆော့ဖ်ဝဲ-defined အမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြ (#SDVS) ပလက်ဖောင်း၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဟာ Matrox X.mio5 Q25 ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် SMPTE ယင်း၏ viz အင်ဂျင် 2110 ပါဝါမှ ST4network interface ကို Controller ကို (NIC) ကဒ်အင်ဂျင်ဆပ်။ ၏နောက်မျိုးဆက် Vizrt'' s ကိုပလက်ဖောင်းပေးသည် core ကိုဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်နှင့်ဗီဒီယို, viz အင်ဂျင်4အဆိုပါ leverages Matrox X.mio5 Q25 State-Of-The-Art ကို virtual စတူဒီယိုအစုံနှင့်လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဘဏ်ဍာအဘို့အ 25 GbE ကျော်ပြိုင်ဘက်ကင်း Multi-ရုပ်သံလိုင်း 4K ဗီဒီယိုကို I / O ကို enable 25 GbE NIC card ကို။
IBC 2019 ၏တက်ရောက်နေ့စဉ်ပေါ် Big AR အားကစား Show မှာပလက်ဖောင်း drive ကိုဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဂရပ်ဖစ်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည် Vizrt ခန်းမ 7-7.B01 အတွက်တဲ။
ကို virtual စတူဒီယိုအစုံ Reinventing, အဖြစ်မှန်ဂရပ်ဖစ်လုပ်ခဲ့ပြီး
viz အင်ဂျင် 4, ဒီဇိုင်းပြန်ဆိုနှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုပေါင်းစပ်မည်သို့ကို virtual စတူဒီယိုအစုံနှင့်လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဂရပ်ဖစ် revolutionizes ။ အဆိုပါသည် Programmable ဂရပ်ဖစ်ပိုက်လိုင်း field ရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်နက်ရှိုင်းတူသောရွေးချယ်စရာအပိုသရုပ်မှန်ပေးအတူအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ကူညီရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-based တင်ဆက်မှုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ illumination ပါရှိပါတယ်။ အသစ် Fusion Keyer ထိန်းချုပ်မှုအတောအတွင်းအသုံးပြုသူများဿုံ Ultra-လက်တွေ့ရလဒ်အတွက်တစ်စင်ကြယ်သောအတားအဆီး key ကိုပေးခြင်း, တစ်ဦးကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်သို့တင်ပြဗတ္တိဇံပေးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အိုင်ပီ-based Workflows များအတွက်ခြွင်းချက်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်
အနာဂတ်အထောက်အထားမှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ viz အင်ဂျင်4ဂေဟစနစ်, နောက်ဆုံးပေါ်အင်ဂျင်ကနေ Multi-ရုပ်သံလိုင်း IP ကိုဗီဒီယိုက I / O ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Matrox X.mio5 Q25-တစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း NIC card ကိုတပ်ဆင်ထားဆပ် HD ရွေ့လျားမှုသပ္ပါယ်က de-interlacing, သဘာဝစကေးနဲ့ high-သိပ်သည်းဆ 4K ကဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အစွမ်းထက်ဖွဲ့စည်းမှုအင်ဂျင်နှင့်အတူ 4K ဖို့, လေယာဉ်ပေါ်တွင် Multi-ရုပ်သံလိုင်း HDR စကားဝိုင်း, ။ ဗီဒီယိုတစ်ကားကို-သတိထား COTS အဖြစ် Architected SMPTE စံကွန်ယက်ကို stack လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအပါအဝင် IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏မျှော်လင့်ထားသည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့စဉ် ST 2110 NIC, Matrox X.mio5 Q25, ထုတ်လွှင့်ကိရိယာလိုအပ် 24 /7ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါကယ်တင်တတ်၏။
"Vizrt အဆိုပါ viz အင်ဂျင်5နည်းပညာထဲသို့ Matrox X.mio25 Q4 NIC ကဒ်၏ချောမွေ့စွာနဲ့အောင်မြင်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟု Gerhard Lang မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ်ကဆိုသည် Vizrt။ "X.mio5 Q25 ရဲ့မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်ဘုတ်အဖွဲ့ဒီဇိုင်း, ပလက်ဖောင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုစွမ်းရည်တိုးမြှင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Multi-ရုပ်သံလိုင်းက high-resolution နဲ့ HDR ကို output ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖွများနှင့်အဆင့်မြင့်ထောက်ပံ့ SMPTE viz အင်ဂျင် 2110 စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးအနာဂတ်-အဆင်သင့်ပလက်ဖောင်းအောင် ST4ထောက်ခံမှု။ "
"၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် Vizrt'' s ကိုဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ဆက်လက်, ကြှနျုပျတို့ Matrox ကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်နေကြသည် SMPTE ST 2110 ကတ်များဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ "အယ်လ်ဘာတို Cieri, အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး, Matrox ဗီဒီယိုကဆိုသည်။ "Matrox X.mio5 Q25 ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ကပံ့ပိုးထားပြီး SMPTE ST 2110, အိုင်ပီ, UHD နှင့် HDR ကိုအထောက်အပံ့နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု, viz အင်ဂျင်4သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းပြောပြအလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့ထူးခြားဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းများကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ထုတ်လွှင့်, content တွေကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများအာဏာ။ "
Matrox X.mio5 Q25 နှင့် Matrox ၏ပြီးပြည့်စုံသောအကွာအဝေး SMPTE ST 2110 NIC ကတ်များ 2019.B13 ရပ်, စက်တင်ဘာလ 17-7 ထံမှ IBC 15 မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Vizrt မီဒီယာအကြောင်းအရာထုတ်လွှင့်အတွက်ဖန်တီးသူ, အားကစား, ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် software ကို-defined အမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြ tool များ၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ Vizrt Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်, ဗွီဒီယိုပလေးအောက်, စတူဒီယိုအလိုအလျောက်, အားကစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သတင်းစာဆရာပုံပြင် tools တွေကိုအဘို့အစျေးကွက်-defining software ကို-based ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ ကျော်သည်သုံးဘီလီယံကိုလူများကပြောသည်ပုံပြင်များစောင့်ကြည့် Vizrt နေ့စဉ်ထိုကဲ့သို့သောက CNN, CBS, အဖြစ်မီဒီယာကုမ္ပဏီထံမှအပါအဝင်ဖောက်သည် အား NBC, Fox က, ဘီဘီစီ, BSkyB, Sky Sports နှင့်အယ်လ်ဂျာဇီယာ, NDR, ZDF, စတားတီဗီ, ကွန်ယက် 18, Tencent နှင့်များစွာသောပို။ Vizrt 700 လူမျိုးစုများနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 30 ရုံးများအတွက် operating, 52 န်ထမ်းကျော်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး, မကြာသေးမီကအိုင်ပီ-based, ဆော့ဖ်ဝဲ-မောင်းနှင်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီဝယ်ယူထားပြီး, NewTek. Vizrt နော်ဒစ် Capital ကိုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ VIII ကပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Vizrt ပိုကောင်းပြောသည်စတိုးဆိုင်များ, mores ဖြစ်ပါတယ်။ www.vizrt.com
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-09-14
ယခင်: Matrox SMPTE ST 2019 ဖို့လုပ်နေဆဲကတိသစ္စာတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေပါတယ် IBC 2110 JT-မိုင်အော်ပရေးရှင်းစမ်းသပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကျော်ပြီ
နောက်တစ်ခု: Matrox ဧကရာဇ် EDGE ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Vimeo စတူဒီယိုနှင့်အတူတိမ်တိုက်-အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်မှုကိုဖွင့်